Ucela uxhaso owelwa yindlu eZinketheni | News24
Ucela uxhaso owelwa yindlu eZinketheni
Igumbi elihlala uNkk Fikile Ndebele.IsTHOMBE: lETHIWE MAKHANYA
OWESIFAZANE waseZinketheni uthi esecabanga ukunikela ngengane yakhe kwabezenhlalakahle ngoba usekhathele ukuyibona ihlukumezeka ngenxa yenhlupheko abhekene nayo.
UNkk Fikile Ndebele (40) onendodakazi eneminyaka eyi-15 ubudala uthi ucelanoma ubani ongamsiza ukuthi abe nendawo yokufihla ikhanda njengoba indlu abahlala kuyo ingena imvula futhi isingawa noma yinini.
Elandisa i-Echo uthe ubephila ngokubamba amatoho ukuze bakwazi ukulala bedlile nendodakazi yakhe kodwa manje sekunzima nokuwathola lawomatoho njengoba esengumuntu ongakwazi ukusebenza ngenxa yokulimala.
“Ngingumuntu ongazange akhule kahle njengoba ngakhulela ekhaya lezintandane. Angifuni ukuthi ingane yami igcine isikhula ngendlela engikhule ngayo kodwa ngiyabona ukuthi kuzogcina lapho. Ayikho into engihlukumeza njengokubona ingane yami ikhula ngaphansi kwalesi simo esiphila kuso. Indlu esihlala kuyona yodaka iyigumbi elilodwa nalo liyawa liyanetha.
“Umakhelwane useze wangisiza wanginikeza useyili wokuthi ngimboze lapho okunetha khona kodwa ngiyabona ukuthi ukuhamba kwesikhathi lendlu izowa sihleli kuyona ngaphakathi,” kuchaza yena.
Uqhube wathi kuyimanje uhleli ekhaya akasebenzi baphila ngemali yesibonelelo sengane futhi ayenele.
“Ngonyaka owedlule ngathenga indawo yokwakha kanye nemabhuloksi okwakha angu-600 ngoba ngithi ngizama ukwakha indlu noma encane esizokwazi ukuthi sihlale kuyona nendodakazi yami, kodwa amandla aphelile engisazi ukuthi ngizokwenza njani. Kwangithatha iminyaka emithathu ukuthi ngikwazi ukuthenga lamabhuloksi njengoba ngangiqongelela amasenti. Uma nje ngingathola umuntu ongangixhasa noma angilekele ukuze ngikwazi ukuba nendawo yokuhlala esesimweni nengane yami.
“Angifuni ukuthi ngigcine senginikela ngengane yami kodwa uma kungukuthi angilutholi usizo kuzongiphoqa ukuthi ngigcine sengikwenzile ngoba sengikhathele ukuyibuka ikhula ngokuhlupheka.”
Uthe ingane yakhe ayisheshi ukufika ekhaya uma iphuma esikoleni, kuze kuphoqe ukuba ahambe ayoyilanda futhi usola ukuthi lokho kudalwa ukuthi ayifuni ukubhekana nesimo sokuhlupheka esisekhaya.